Beijing L&Z Medical dia nanatrika ny fivoriambe fampirantiana sy fampirantiana momba ny fitaovana fampiroboroboana faha-30 any Sina
Ny Fikambanan'ny fivoriambe sy ny fampirantiana fitaovam-pitsaboana any Shina faha-30, tohanan'ny Fikambanan'ny fitaovam-pitsaboana ao Shina, dia hatao ao amin'ny Suzhou International Expo Center amin'ny 15 ka hatramin'ny 18 Jolay 2021. Fikambanan'ny Fikambanan'ny fitaovana fitsaboana any Shina dia mampifangaro ny “politika, indostria, fandalinana ,. ..
Fantaro ny stopcock 3-lalana amin'ny lahatsoratra iray
Fisehoana mangarahara, mampitombo ny fiarovana ny fampidirana, ary manamora ny fandinihana ny havizanana; Mora ny miasa, azo soloina 360 degre, ary ny zana-tsipìka dia manondro ny fitarihana mikoriana; Tsy tapaka ny fikorianan'ny rano mandritra ny fiovam-po, ary tsy misy vortex azo, izay mampihena ny ...
Inona no tiana holazaina amin'ny hoe "tsy fahazakana sakafo mahavelona tsinay" amin'ny fanafody?
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny teny hoe "tsy fahazakana sakafo" dia be mpampiasa amin'ny klinika. Raha mbola miresaka momba ny sakafo ara-dalàna ny enteral, mpiasa ara-pitsaboana maro na marary sy ny fianakaviany no hampifandray ny olan'ny fandeferana sy ny tsy fandeferana. Ka, inona marina no tsy mahazaka ahy ...
Ny fepetra fisorohana ny fikolokoloana sakafo ara-dalàna
Ireto ny fepetra fisorohana ny fikolokoloana sakafo mahavelona enteral: 24 ora. Ny ...
Ny fahasamihafana sy ny safidy eo amin'ny enterrit nutritio
1. Ny fanasokajiana ny fanampiana ara-pahasalamana ara-pahasalamana Enteral (EN) dia fomba iray hanomezana otrikaina ilaina amin'ny metabolisma sy ireo otrikaina maro samihafa amin'ny alàlan'ny lalan-dra. Ny sakafo maha-ray aman-dreny (sakafo maha-ray aman-dreny, PN) dia tokony hanome sakafo avy amin'ny lalan-drà ho sakafo mahavelona ...
Ny satan'ny fampandrosoana sy ny tontolon'ny fifaninanana eo amin'ny tsenan'ny fitaovana fitsaboana manerantany amin'ny 2021
tsenan'ny fitaovana amin'ny 2021: fifantohana avo lenta amin'ny orinasa Fampidirana: Ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana dia indostria mirona amin'ny fahalalana sy mavesatra renivohitra izay miampita sehatra haitao avo lenta toy ny bioengineering, fampahalalana elektronika ary sary. Amin'ny maha indostria mivoatra stratejika mifandraika ...
Ny fomba fikajiana ny tahan'ny fahaiza-manao sakafo ara-piterahana
Ny sakafo maha-ray aman-dreny - dia manondro ny famatsian-tsakafo avy ivelan'ny tsinay, toy ny intravena, intramuscular, subcutaneel, intra-kibo, sns. Sakafo ara-tsakafo intravenous ...
Torohevitra folo avy amin'ny manam-pahaizana momba ny sakafo sy ny sakafo ho an'ny aretina coronavirus vaovao
Mandritra ny vanim-potoana sarotra amin'ny fisorohana sy fanaraha-maso, ahoana no fomba handresena? Tolo-kevitra momba ny sakafo manam-pahefana 10 sy manam-pahefana indrindra, manatsara ny tsimatimanota! Mirongatra ny virus coronavirus vaovao ary misy fiatraikany amin'ny fon'ny olona 1,4 miliara ao amin'ny tanin'i Sina. Manoloana ny valanaretina, h ...
Fomba fiasa amin'ny fomba famahanana orona
1. Omano ny entana ary ento ho eo am-parafara. 2. Amboary ny marary: Ny olona mahatsiaro tena dia tokony hanao fanazavana mba hahazoana fiaraha-miasa, ary maka ny toerana mipetraka na mandainga. Ny marary comatose dia tokony handry, hamerina ny lohany any aoriana, hametraka lamba famaohana eo ambanin'ny valanoranony ...
Torohevitra manam-pahaizana momba ny fitsaboana ara-pahasalamana ara-pahasalamana ho an'ireo marary COVID-19 vaovao
Ny pnemonia coronavirus (COVID-19) amin'izao fotoana izao dia manjaka, ary ireo marary be taona sy marary tsy dia manana sakafo fototra dia tsy dia marary intsony aorian'ny aretina, manasongadina ny fitsaboana mahavelom-bolo manan-danja kokoa. Mba hampiroboroboana bebe kokoa ny fanarenana ireo marary, ...